ukufundisa — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Le ntetho Uhambo ukususela kwiNkomfa ERLC phezu yeVangeli noXolelwaniso Racial. Ngasezantsi ngqangi kuloo umyalezo.
Ngoku kuhlwa, Bendikhe wacelwa ukuba bathethe malunga millennials noxolelwano ngokobuhlanga. Kwaye ndiziva nelungelo ukuma apha abe yinxalenye yeli phulo emangalisayo ukuya umanyano ibandla likaThixo.
Njengoko rapper, Ndiye ibe yinxalenye kakhulu eekonsathi kwiminyaka ngezininzi millennials nabantu bonke abaminyaka isusela. Yaye ndikhe ndabona ukuba umculo ngokwenene indlela yabantu zokudibanisa. Kukho ezinye iikonsathi apho kukho indlela enye kuphela abantu: mhlawumbi bonke oomama ekhatywayo kunye elivisayo ezimhlophe ipoma, okanye bonke abafundi beekholeji ezidolophini, okanye bonke abalusi emazantsi umbhaptizi enxibe khakis (hayike, mhlawumbi ukuba omnye wokugqibela). Kodwa kukho ezininzi apho kukho zonke iintlobo ulutsha nabantu abadala, emnyama nemhlophe, kunye namanye amaqela ezininzi. Yaye abantu bayakhel rhoqo ukumangaliswa ukwahluka, kwaye ndicinga ukuba yinto entle ngokwenene kwakunye.
Nangona mna ndicinga ukuba Lipholile nomhle, Andiqondi ukuba njengoko Nakuba abanye phandle ukuba. Yonke imihla kukho…
Ngaba Kubalulekile ukuba uYesu Rose?
Kaloku thina ngeenxa xesha lonyaka. Enye amaxesha amabini abaninzi siye ecaweni nomama wethu, okanye anxibe isuti nice yePasika intloko isakhiwo yecawa ekufutshane. Ndiyazi abanye y'all sele isuti yakho yePasika isinxibo wakhetha.
Kubonakala ngathi wonke umntu ufumana uthabatha inxaxheba kwimibhiyozo. IKrismesi neIsta loo maxesha umdla lonyaka xa nokuba abantu badla andikhathali ngoYesu luxakeke ngandlela ithile. Kukho amaqanda yePasika neelekese iPasika ziyathengiswa naphi. Kukho iinkqubo pasika, kwaye luhamba. Ista uthathela kancinci, nangona abaninzi abakholelwa ibali pasika.
Oku akothusi nangona kuba yePasika iKrismesi baba neziganeko zenkcubeko. BaLalile yaba ngaphezu leeholide zikazwelonke kancinane, zokudibanisa usapho, namathuba abathengisi ukuba enze imali engakumbi. Kanjalo, abo bakholelwa zokuzalwa kokufa kukaKristu ukubhiyozela ukuba, kodwa akukho nto kufunwa.
Ndikhumbula ekhula usapho wayeba bonke eIsta. Singavuya ukuya mall kwiveki phambi uthabathe umfanekiso kunye Rabbit. Mna buqu Ndicinga ukuba yeyona creepiest zonke mascots leeholide. A onzima…
Kutshanje Ndafunda biography of Steve Jobs, iMbangi imboni ngasemva Apple, inkampani inkulu ehlabathini. Oku kwakunomdla ukufunda kuba yingqondi…
Ndingubani? inxalenye 1: Beautiful Kodwa Usenokuyaphula
Le veki siya khona ukuthetha ngokuzazisa. Yiloo nto iinkokheli zenu wandicela ukuba bathethe malunga, kodwa abazange ndiyazi ukuba oku yayisele into Sekudlule entliziyweni yam ukuba bendikhe ndacinga. Ndiye ndithethe ngalo neqela lulutsha ecaweni yam D.C. thule kancinci.
Ngoko kutheni identity sentliziyweni yam? Kutheni ucinga ukuba kubalulekile ukwazi ukuba ngubani na? Ngenxa Ukuba awuyazi ukuba ungubani, awuyazi kodwa ubumele ukuba baphile.
Cinga The Bourne Isazisi. Lo mntu uyavuka isikhephe kwaye engazi ukuba ngubani na. Yena ufumana nokwazi aze aye eSwitzerland. Yena ufumana emlweni liyayiqonda uye abaqeqeshelwe ukulwa. Ngaba loo nto crazy ukuba randomly wafumanisa ukuba banobuchule ninja ofihlakeleyo? Kuba eseleyo bhanya nguye uhambo ukufumanisa ukuba ngubani na. Nguye okwaziyo izinto akazange nokuwazi. Kodwa xa engayazi loo nto, akayi kuba nako ukuphila…
Ndandibukele nje olu dliwano Rule Ja izolo. Wayethetha ngayo namava akhe iicawa. Yakhe kumava amabandla wathi usoloko kuza njengoko…
Ukuba kukho naluphi na uhlobo lomculo isini ukuthetha ukuleqana emva ubomi obulungileyo, nto hip-hop. Ndiyamthanda hip-hop. Ndinithandileyo hip-hop ubomi bam bonke. Kukho into ethile malunga igubu, kunye izicengcelezo, yaye amandla nto ebesoloko kum. Xa umntwana, xa engekho eklasini okanye ulele - udidi okanye balele - bendimamele ukuba Rappers endizithandayo. Ndandidla kwakungenawo ngelizwi labo bonke, kwaye kwafuneka kakhulu ukuba ndithi. Ndiyazi inkoliso Rappers abazami ukuba ngabafundisi, kodwa lonto ayithethi ukuba akazange ukufunda. Ndaphulaphula ngokusondeleyo ukuba izimvo zabo malunga ubomi obulungileyo - yaye ndayithanda into ndeva.
Kwafuneka iingoma azithandayo ezifana "Imali asilizwi,"Yaye mna ukuphulaphula albums izibizo ezifana" Fumana oluTyebileyo okanye Die Ukuzama. "Ngoko ngokwenene akumangalisi ukuba ingcamango kwam ubomi elungileyo ukuba isipaji ukuze wafaka ukuba engathandi kufutshane. Oku akuthethi zonke imali, nangona. Ndifundile Hedonism, nomntu ongathandani naye, eziphathekayo, ayenze, ubuvila, iziyobisi, nokufumana imbeko - wonke njengoko pieces kwiphazili leyo…
Njengoko abanye uyazi, Ndingu nguyise olutsha. Unyana wam, Q, ngaba uneenyanga ezintlanu ubudala. Kwaye phantse vuyela, ngaphandle xa bamfaka ibhedi yakhe, ukuba balale. Ngoko nangoko ulahlekelwa ingqondo yakhe. Yena nzulu ucinga siye bamshiya akhusele kuye bonke ubunzima ngeenxa zonke kuye, ezifana ukudinwa abafuna ilweyile watshintsha.
Kodwa ngenye imini bafumanisa uvuyo ngokum esandleni sakhe. Yinto self-eliphantsi aye bacinge. Ke xa ubeka isandla sakhe emlonyeni wakhe - kwaye ngokwenene shoves oko khona - uyalibala zonke iimbandezelo zakhe. Ayizi okunene ukutshintsha into yokuba wamshiya yedwa egumbini lakhe, kodwa isandla yenza kuye ulilibale apho.
kakuhle, Ndiyazi ukuba wonke umntu apha namhlanje uneengxaki ezinkulu kuno ulele wedwa kwigumbi. Siya kuba imiba yemali, imiba umtshato, nemiba yempilo, kwaye nangokunjalo. Kwaye efanayo kunyana wam, amaxesha sikhe sikhangele neendlela zokumelana iingxaki zethu. Asifuni ukuba azive ukuba intlungu nengcutheko. Ngoko sibhenela izinto ezenza ukuba ulilibale apho. Kodwa ke ukuba eyona ndlela ukujongana nayo? kwesiphazamiso?
Kwaye nantoni na kukho eninzi uqalisa ukuba awuxatyiswanga. Ixabiso into utshintsho olusekelwe kangakanani kwalo kukho. Xa kukho 100 cookies phezu kwetafile emva kwenkonzo unokuqhubeka ukuthetha okwethutyana. Kodwa xa kukho cookies nje ezimbalwa, bakhangeleka anqabileyo. Mhlawumbi oya Akunakukhawuleza khona kwaye ukuba ufumana esinye ngexesha, ukuba…
Kakuhle yomnqophiso New, apho iintetho yethu ibali ngokuhlwanje, iphantse ifana remix. Ndithi ngenxa yokuba uThixo uthembisa ukuba enze umnqophiso omtsha nabantu bakhe, kodwa yonke into ngayo asinto intsha. uphawu lakhe aliguqukanga, izithembiso zakhe akazange atshintshe, injongo yakhe yonke akazange atshintshe. Kodwa kukho ezinye izinto ngalo mnqophiso…
Ndifuna ukuqala ngokufunda ezinye zezicatshulwa. Ngoko siliphulaphule nje kwaye ucinge ukuba uyavumelana okanye hayi noko wathi.
"Umsindo uhlala kuphela esifubeni sezidenge." - Albert Einstein
"Umsindo ukuba kukugeza mfutshane." - Horace
"Nantoni siqalile ngomsindo iphela enentloni." - Benjamin Franklin
"Ungaze ukwenza nantoni na [umsindo], ngokuba niya kwenza yonke into engalunganga. " - ushwankathele
Umsindo namnye kwabo ngeempawu sidla sinqwenela. Akukho mntu uthanda umsindo. Umsindo kukhokelela ubukrakra kunye nenzondo. Umsindo ikhokelela izigqibo olubi. Umsindo ngamanye kukhokelela ubundlobongela. Abantu badla awufuni ukuba phakathi komntu ekusenokwenzeka ebhabha isiphatho nangawuphi na umzuzu. Kubonakala isuntswana iyahlozinga.
Kodwa nantsi umbuzo wam: uThixo nomsindo? Ngaba kukho nantoni na enokwenza uThixo isisihiba iphela abilayo? Kulungile ndiyacinga umbhalo yethu ngokuhlwa iya kuphendulwa loo mbuzo.
Awunayo ukuba nam. kwiEksodus 17, abantu bakwaSirayeli ukuvavanya uThixo ngokwenza njengoko ke, ukuba uthembe. Emva kokuba yonke into Uyayazi kwenziwa kubo, eyenza abantu bakhe, ba khulula, ngokubonelela kubo njalo, ke nangoku musa uthembe. Ngoko ke ukulwa…
Enye Ubomi Yibalisele
uYesu, ezele nguMoya oyiNgcwele, wabuya eYordan, wesiwa nguMoya…
Kukho abanye abantu abalungileyo izinto ezithile. Kukho abadlali ngaske abadlala akule league iminyaka ngeminyaka Bayigqiba amakhondo angayiwayo banoyolo. Babefuna ukudlala lo mdlalo wayemthanda bona babefuna ukwenza umsebenzi ngokwenza oko. Benza kwaye bona okulungileyo. Ngoko kukho nabanye, njengoMichael Jordan.
Michael Jordan yaba ngaphezu elungileyo. Yena mkhulu - baninzi besithi, eyona inkulu. Michael Jordan wayengekho umxholo kunye bedlala umdlalo nje nokwenza umsebenzi. UMike wayefuna ukuba kubhetele wonke. Wayengekho umxholo zokwenza oko, wayefuna ukuba eyona. Ngoko ke wahlala ejimini kamva kunokuba wonke waza wasebenza nzima ngaphezu wonke. Kwaye konke oku kuba wagxothwa kakhulu loo mnqweno kukufumana. Wayibona le kwiholo yakhe intetho udumo. Waye umngeni abantu beza indalo yakhe wokhuphiswano phandle njengengazange ngaphambili. Wagxothwa.
Ukuba ndikwazi nokuncokola amagcisa ezifana Lil Wayne. Kukho ezinye Rappers abo nje sifuna ukuba nendumasi kwaye zenzi imali. Hayi Lil Wayne. Ufuna ukuba mkhulu…